Uninstall kunyorera kana zvirongwa paMac yako pasina kusiya trace. | Ndinobva mac
Wanga uchingoshandisa yako Mac nyowani kwenguva pfupi uye nguva yasvika kana iwe uchida kusunungura imwe yemapurogiramu, maturusi kana zvinoshandiswa zvaunazvo pane yako system uye iwe hauzive kuzviita kuti zvive zvakakwana kubviswa. Mune ino kesi isu tinofanirwa kucherechedza izvozvo kubvisa zvinoshandiswa kana zvirongwa mu macOS zviri nyore chaizvo uye haufanire kufunga zvakawandisa kana kuomesa hupenyu hwako zvachose.
Kungofanana nekuiswa kwemaapplication iri iri basa riri nyore, nekukurumidza uye rakachena, kana tichifanira kuita tisina ivo, kureruka uye kumhanya zvakafanana. Muchidimbu, isu hatidi zvikumbiro zvechitatu-bato zvekubvisa zvirongwa, hapana zvakare chikonzero chekufunga kuti panogona kunge paine zvisaririra zvekudzimwa zvikumbiro sezvo sisitimu inoshanda iri yekubvisa zvasara, asi Kana isu tichiri kuda kushandisa chaiwo maficha kubvisa maapplication, tinogona kuzviitawo.
1 Bvisa maapplication pasina wechitatu-bato maapplication
1.1 Sarudzo yekudzima application haina kuoneka
2 Ngatitangei na CleanMyMac
3 AppZapper ndiko kunotevera kunyorera
4 AppCleaner ndiyo yechitatu yatinokurudzira
5 Kupfupisa zvishoma
Bvisa maapplication pasina wechitatu-bato maapplication
Sezvatakazivisa pakutanga kwedzidziso iyi, kune chechitatu-bato kunyorera kuti ubvise maapplication kubva kuchikwata chedu asi chekutanga ndechekuona kuti izvi zvinoshandiswa hazvinyatsodiwa sezvo tichigona kubvisa zvakananga nekungodhonza kuenda kumarara kana kusarudza iyo application yatiri kuda kubvisa kubva kuLaunchpad.
Iyi ndiyo yangu sarudzo yakanakisa uye kuti uzviite isu tinongofanirwa kupinda mu Launchpad> Batisisa chikumbiro (senge muIOS) uye iyo "shaky X" ichaonekwa kubaya pairi uye kuidzima.
Sarudzo yekudzima application haina kuoneka
Zvinogoneka kuti mamwe maturusi kana mashandisiro atinawo muLaunchpad - kunyanya iwo asingauyi akananga kubva kuMac App Store- inotorwa pasi zvakananga kubva kune webhusaiti yeinogadzira usaratidze "shaky X" mukona yekumusoro kurudyi kana usavatenderi kuti vabviswe ne "kudhonza wakananga kumarara".
Mune ino kesi isu tinofanirwa kubuda muLaunchpad uye zvakapusa tsvaga iyo icon yekushandisa zvakananga kubva kune yedu Tsvaga. Tinogona kuita izvi zvakananga kubva pawindows yekuwana kana zvakananga kuwana iyo Zvikumbiro folda uyezve zviri nyore sekukwevera kubhini rekudzokorora uye zvinobva zvadzimwa kubva kuMac uye iyo Launchpad.
Ini pachangu ndinogona kutaura kuti nzira iyi ndiyo yandave ndichishandisa kwenguva yakareba kudzima zvikumbiro paMac yangu, asi isu tinogona kushandisa zvinoshandiswa zvatinoona muMac App Store uye kunze kwayo kuti tibvise. Ichi chinhu chakasarudzika kune wega mushandisi uye mune chero mamiriro ezvinhu chinonakidza chinhu nezve izvi ndechekuti if mune yega yega kusvetuka kweanoshanda system senge iyo ichauya izvozvi kubva ku macOS Sierra kusvika macOS High Sierra isu tinoita kuiswa kwakachena kweiyo system, kushandisa kwechitatu-bato kunyorera hakuna rubatsiro. Kana, kune rumwe rutivi, isu tisingamboisa OS yedu kubva pakutanga, zvinokwanisika kuti zvimwe zvekushandisa zvatinozoona pazasi iri sarudzo iri nani, asi iyi haisi 100% inogona kana.
Ngatitangei na CleanMyMac
Ichi ndicho chimwe chezviitiko zvatakaona pane dzakawanda zviitiko muSoy de Mac.Zvechokwadi, chinhu chakanakisa nezve chishandiso ichi ndechekuti chinotibvumidza kuti tiite kuchenesa kwakadzama paMac yedu, kupfuura kungobvisa zvinoshandiswa kana zvishandiso. Iko kunyorera kwakabhadharwa uye hazvisi zvekuti zvakachipa chaizvo kubvira Iyo ine mutengo we31,96 euros, asi nazvo tine mukana wekubvisa, kuwedzera kune mafomu atisingachade, kuchenesa michina yedu muhuwandu.
Asi ikozvino ngatione mabviro atinobvisa zvakananga kunyorera neKuchenaMyMac 3, inova iyo vhezheni iyo inogona kuwanikwa zvakananga mu MacPaw yekuvandudza webhusaiti. Iyi app yanga isingawanikwe pane iyo Mac App Store kwechinguva, asi mushambadzi anogona kuvimbwa nayo.
Isu tinovhura CleanMyMac 3 3.8.4 inova yazvino vhezheni uye isu tinoenda Zvishandiso muzasi kuruboshwe menyu uye tinya Uninstaller. Izvo zvinoshandiswa zvatakaisa paMac yedu zvichaonekwa uye zvakapusa Isu tinosarudza imwe kana mamwe mashandisirwo panguva imwe chete uye tinya paZadza Uninstallation. Tichaona kuti maAubatsiri Mafaira kana Zvido zvekushandisa pachayo zvinowoneka izvo zvichabviswa zvoga.
Iyi ndeimwe yeaya mafomu andakashandisa uye anoshanda chaizvo, asi ini ndinofunga kuti kungobvisa mashandisiro haisiyo yakanakisa sarudzo nekuda kwemutengo wayo. Ehe, inotipa iri nyore uye yakashambidzika interface shandirawo kuchengetedza Mac yako yakachena.
AppZapper ndiko kunotevera kunyorera
Ichi chikumbiro chakapesana zvachose neakare CleanMyMac 3. Mune ino kesi, iko kunyorera kuri kuwanika kunze kweApple application chitoro, ine interface yekare, tinogona kutaura kuti yapera uye haasati agamuchira shanduro nyowani kwenguva yakareba.
Kune rimwe divi, zvese izvi zvemukati uye zvimwe zvinoita sekutanga zvisina kunaka mu AppZapper app, inopesana yakanangana ne fmashandiro uye kureruka kwekushandisa kwesicelo. Kana tangovhura application, iri hwindo rinowoneka matinogona kutanga kudzima maapp:
Isu tinodhonza zvakananga kunyorera kudzima uye ndizvozvo. Asi isu tinogona zvakare bata «switch» inoonekwa kumusoro kwekurudyi uye isu tichaona ese maficha atakaisa pane komputa yedu. Kana tangodzvanya pane yatiri kuda kudzima, maraibhurari anosungirirwa, iyo faira ye log, .plist, nezvimwe, izvo zvinowanzoiswa mune yega yega mafomu pakombuta yedu uye tinya pa "Zap!"
Iko kunyorera kuchabviswa zvachose kubva kuchikwata chedu.
AppCleaner ndiyo yechitatu yatinokurudzira
Yekupedzisira yezvikumbiro izvo isu zvatinoda kugovana nemi mose zvakare iri veteran application mune mabasa ekudzima maapplication uye ari kunze kwepamutemo Apple application chitoro. Mune ino kesi AppCleaner Iyo inotipa isu interface yakafanana chaizvo neyekutanga kunyorera uye nehurongwa hwekubvisa iwo maapplication zvakangofanana zvakafanana. Ichi chishandiso ndechimwe cheicho chandakashandisa zvishoma pachangu asi inoita basa rayo pamwe chete nezvimwe zvinoshandiswa izvo zvatakaona muchinyorwa chino.
Imwechete yakasarudzika yeAppCleaner ndeyekuti kana uchirodha pasi kubva pawebhu haina kuiswa muApplications folda, tinofanirwa kuichengeta manyore. Kana tangoponeswa isu tinozviita uye zvinozoonekwa neine interface yakafanana neAppZapper, kudhonza uye kudzima:
Isu zvakare tine runyorwa rwezvishandiso zvakaiswa paMac kana tikabaya pane yepamusoro kurudyi bhatani. Kana tangova nerunyorwa rwekushandisa, isu tinongofanirwa kusarudza maapplication atinoda kudzima uye ndizvozvo:
Muchidimbu, tinogona kushandisa izvi kana zvimwe zvinoshandiswa zviripo kudzima maapps kubva kuMac yedu, asi chinhu chakanakisa cheiri basa (kutaura pachako) chinogara chirie fomu yechizvarwa cheedu macOS system uye ndezvekuti zviri nyore kwazvo kuita uye hatife takafanira kurodha chero chinhu pakombuta yedu. Ikozve kune maficha senge CleanMyMac iyo inopa imwe nhanho yesarudzo inowanikwa mukuwedzera pakubvisa maapplication, asi pakupedzisira izvo zvatiri kutsvaga mune ino kesi kubvisa izvo zvinoshandiswa izvo zvatisingashandise uye isu tisingazvione zvakakodzera kuisa chero chinhu. Sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, kuravira iwo mavara uye munhu wese akasununguka kuwana urwu rudzi rwekushandisa paMac yavo, asi kutanga tinogona kusimbisa kuti hazvina basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Uninstall zvirongwa kana kunyorera pane yako Mac
chinyorwa chakanaka. Ini ndangotenga mac uye ini ndarasika hafu. inguva yekuchenesa zvishoma.
Miguel Leon akadaro
Chinyorwa chakanakisa, chinobatsira kwazvo kuziva zvirongwa zvinokutendera kuti usunure maapplication pasina kusiya trace.
Dambudziko randiinaro nderekuti ndakaburitsa chirongwa chisina kushanda zvakanaka kuchidzorera zvakare, asi pandinochizama iyo mac hainditenderi uye inondiudza kuti yatove kuiswa, uye mushure mekutsvaga, ini handioni chero zvasara zvaro kwese. Zvandinogona kuita?
Pindura Miguel León
Ndakatenga imwe makore angangoita maviri apfuura uye ini ndanga ndichishanda pavari, ini ndatoziva zvinhu zvakawanda zvandanga ndisingazive uye ndinopfuurira pazviri, asi pakupedzisira iyi komputa yaikosha kwazvo. Kwaziso
dzorera chirongwa nemuchina wenguva, uye wozoshandisa appfixer kana kudzima zvakananga zvaunofarira raibhurari yako yemushandisi.
Pindura kune ichicobo
Mhoro zuva rakanaka !!!. Ini ndinokumbira iwe haugone kudzima kana kusunungura oovoo nezvimwe ... ndiri kutsvaga
Chero eaya mapurogiramu ekubvisa kunyorera, kuteedzera mafaera, nezvimwe, asi muchiSpanish ??? Ndinoonga ruzivo. Ndatenda
iwe unoziva nei safari ichivhura yakawanda yemitambo uye yekushambadzira mapeji
Pindura kune lorenitaduque
Maria de la Luz akadaro
Pindura kuna Maria de la Luz
Diego Ferreira Silva Do Amaral akadaro
Ini handikwanise kurega ZipCloud kubva kumac yangu, ndinozviita sei? Ndatenda
Pindura kuna Diego Ferreira Silva Do Amaral
Ndine hutachiona, ndinoichenesa sei?
Oswaldo molano akadaro
Izvo zvave zvichindibatsira kwazvo.
Pindura kuna Oswaldo Molano
Ini ndinonyora izvi nekuti zvakaitika kwandiri nezuro uye zvakanditorera zvakawanda kuwana mhinduro. Kunze kwekuti ini ndakadhawunirodha app theme theme kubva kumac yangu, uye pandakaivhura, ndakaona kuti hazvisi izvo zvandaida. Saka ndakaita zvandinogara ndichiita, mune yefaira rekunyorera ini ndakawana application kuti ndiibvise, ndikabaya nembeva ndokukwevera kumarara. Hwindo diki raizoonekwa pese pandinoedza kuidzima richindibvunza iyo Finder password kuti ndiibvise. Ini ndaizoisa iyo yega yandinayo, inova maneja wemac yangu, inova iyo imwe chete iyo inokukumbira iwe kana iwe uchitsvaga chikumbiro, hazvo, pakanga pasina nzira. Iyo komputa yakashanda zvakafanana, asi mukati mendangariro yangu yakandiudza kuti panofanirwa kuve neimwe sisitimu iyo inokurega iwe uchidzima. Ini ndakapinda mukushandisa ini handizive kangani kuti ndione kana ndichigona kuwana chimwe chinhu chakanangana, uye kubatabata ndakaona kuti yakaisa muhwindo iro iro application raive rakavharirwa uye ndakawana runyorwa gadziriso nehurongwa ini ndinotenda muHTLM. Huya, hapana zano rekubira. Ndakaonawo zvinhu zvinoverengeka kunze uko zvekuisa zvinyorwa zveHTLM muwindo rekupedzisira, asi sezvo ini ndisinganzwisise chero chinhu nezve mac, ini ndakasarudza kuramba ndichitarisa. Mukupedzisira sekugara ndakazviwana. Chaive chikuru chisina maturo chiripo uye chinotevera: Dhonza kunyorera kuLaunchpad uye ubatisise negonzo, wobva waridzima. Ndakaona mafambiro aiita yakananga kudoti remarara uye ndakaibvisa, ndichitarisa kumberi kuti yanga isisimo mune runyorwa rwekushandisa. Uye ndizvozvo. NDINONYORA ZVESE IZVI SEBATSIRO, MUMWE MUMWE MUNHU ANOGONA KUITIKA IZVOZVO PANE DZIMWE NGUVA. Ndinokutendai nekutsungirira matambudziko ese andakakuisirai.
Ndiri kutarisa kuti chero application yandinotora kubva kuApp Store, saka haindibvumire kuibvisa, asi iri neyaimbove yakanyorwa system, inova kuidzima kubva kuLaunchpad. Ini ndinowana hwindo iro rinonyatsotaura zvinotevera: FINDER ANODA KUTI ACHinje. Pinda PASI PASI RAKO KUTI UBVUDZE IYO BASA. Username ****************** Password ****************, uye pazasi, Kanzura kana Gamuchira windows. Mumwe munhu anogona kundiudza kuti nei izvi zvichiitika kwandiri? Kutenda kwazvo.
Kwazisai vese, zvese zvamunoratidza zvinobatsira, asi ini ndinokuudza kuti ndave kuda kuendesa yangu 2015 macbook yandakatengesa uye ndinoda zvinopesana nezvamunoratidza…. Ini ndoda kudzima mapikicha, data, nezvimwe, zvisiye zvakachena asi pasina kudzima maapplication, ndinokumbira rubatsiro rwako ndapota
Thanks appzapper yakandishandira.
OWC inosimbisa kuti ese matsva makumi maviri neshanu "iMac inogona kuisa kusvika pa27GB ye RAM